Ciidamada ammaanka Puntland oo howgalo ka dhan argagixisada ka bilaabay magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada ammaanka Puntland oo howgalo ka dhan argagixisada ka bilaabay magaalada Boosaaso
Ciidamada ammaanka Puntland oo howgalo ka dhan argagixisada ka bilaabay magaalada Boosaaso
Ciidamada Mareykanku tababaray ee amaanka Puntland (PSF). [Xuquuqda Sawirka: Cali Cabdi Ducaale/sawir-qaade madaxbanaan]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa howlgalo ka dhan argagixisada ka bilaabay guryaha kuyaala magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari maanta oo Khamiis ah.
Wariyaha Puntland Mirror ee Boosaaso Cabdullaahi Boodacade ayaa kusoo waramay in ciidamo gaashaaman lagu howlgashay xaafadaha magaalada Boosaaso.
Ciidamada ayaa intii ay howlgalka wadeen ku xiray in ka badan 20 qof oo looga shaki qabo kooxo argagixiso, sida uu sheegay wariyuhu.
Howlgalka ayaa imaanaya wax ka yar labo asbuuc kadib markii weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso lagu dilay taliye ku xigeenkii ciidamada booliiska Puntland Jaamac saxardii iyo agaasimihii madaxtooyada Boosaaso Aadan Gaas Huruuse, oo ay masuuliyadooda sheegatay maleeshiyada Al-Shabaab.
October 24, 2016 Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug oo mar kale ka qarxay Gaalkacyo
February 19, 2017 Ugu yaraan 20 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay suuq kuyaala Muqdisho
August 12, 2017 Puntland oo ciidamo u dirtay gobolada Sool iyo Sanaag
Puntland security forces conduct anti-terror raids in Bosaso port town
Ugu yaraan 54 qof oo ku dhimatay dhul-gariir ka dhacay Indonesia
Jakarta-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 54 qof ayaa ku dhimatay tobonaan kalena waxaa laga baqayaa in ay ku hoos jiraan burburka kadib markii dhul-gariir xoog badan uu ku dhuftay jasiirada Sumatra ee dalka Indonesia, sida ay [...]
Ciidamada ammaanka Puntland oo howlgalo amniga lagu sugayo ka bilaabi doona gudaha Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa la filayaa in ay howlgal qorshaysan ka sameeyaan gudaha Garoowe oo lagu ugaarsanayo shakhsiyaadka dhibaatada ku haya amniga magaalada, sida uu sheegay masuul dowladda katirsan. Isaga oo la hadlayay [...]